Farqiga naagaha u dhexeeya
» Farqiga naagaha u dhexeeya
Odaygii ayaa waxaa uu ku yiri Wiilkiisa:-”Maandhow, inta aadan guursan, oo aadan dhex-dabbaalan badweynta Haweenka, bal marka hore si fiican isaga eeg oo hubso gabadha ama Haweeneyda aad la aqal-galayso; Ogowna in ay Haweenku u kala baxaan toddoba nooc”.
Wuxuu tibaaxay Odaygu: “Iga dhegeyso aan kuu bidhaamiyee sida ay kala yihiin toddobadaas,waana kuwan”:-
(2) Dheg-dheer:- Waa tan reerkeeda ku burburisa, ninkeedana ku colaadisa waxa ay soo maqashay oo kaliya,aanna hubsan xaqiiqada. Waxay ku tiraahdaa seygeeda:-”Waan maqlay in aad naag kale la socoto”,”Waa la ii sheegay in aad xiriir la leedahay heblaayo”,”Waan la socdaa meelaha aad beryahan ka daba-wareegto”iwm..
(3) Carrab-dheer:- Waa qaylo badan,joogto ugu taagan derisyadeeda, ninkeeda,caruur iyo cirroolaba uusan qofna ka baxsanayn. Waxay ninkeeda ku gaaddaa g ogosha iyo xilliyada nasashada,dabadeedna waxay ku furtaa dood,dacwad iyo dalabaad aan dhammaaneyn. Waxay macallimad ku tahay Af-lagaaddada iyo jaa’ifeynta.
(4) Gacan-dheer:- Waa tan dagaalka un u taagan,mar kastana ay dhexdu u xiran tahay; garruunka wadata oo gaadmada badan. In ay dadka ku duufto un bay u tafa-xeydan tahay. Wejigeeda waxaa ka muuqanaya raadadka ciddiyo lala beegsaday iyo daqarro hore oo lagu hubsaday.
(5) Lug-dheer:- Waa war-wareegtooy, waaba tiris, oo ay dhif tahay in laga helo aqalkeeda. Markii uu ninkeedu yimaado guriga waxaa ka soo hor-baxa quful weyn oo maar ah. Caruurteeda ayaa odayga u sheega in ay hooyadood ku maqan tahay:-aroos, nikaax,dhaloow, furoow, qaraaba-salaan,tacsi loo fadhiyo maalintii 14-aad, maalin-joog, meel ay ku kulmayaan habro ayuuto (Shaloongo) isku darsaday,madax-shub(abaay-abaay) iwm.
(6) Joog-dheer :-Waa mid Jamaal badan ah, waa gabadha dhammeysay quruxda muuqata ee xagga jirka ah (jiroos), indha-deeraley ay raggu ka daba-dhacaan, ishana la wada raacaan, laafyada iyo is-lulidda badan (i arkaay).
Laakin,markii la tago gurigeeda,waxaa lala kulmaa dhiiqo,dhusuq iyo dharaq is-dhex-yaal. Ma jirto gogol kaliya oo u goglan iyada. Halka ay ku karinayso cuntada waxaa bar-bar yaalla Tuunji ay saxaradii Caruurtu ka buuxdo oo shalay ahaa. Iyadaa sanka baloolisa oo “Uf” kala hor-marta dadka kale.Waa mid aan lagu gaareyn areebanimada, markii gadaal loogu noqdo.
(7) Garaad-dheer:-Waa “Marwo-dumar”. Waa tan ugu qiimaha badan haweenka; laga yaabo in ayan muuqaal ahaan qurux badnayn, amaba iska fool-xun, laakinse, waxay leedahay quruxda dahsoon ee edeb, akhlaaq, sarriig, xishood, af-gaabni, dulqaad, qaddarinta dadka mudan iwm. Aqalkeedu waa udgoon badan yahay,waa wada goglan yahay,waxaa u sugnaaday nadaafad buuxda oo xagga hoyga, huga iyo hungurigaba ah.
Mooral iyo Macnawi ahaanba waa ay u dhistaa ninkeeda, waana uu ku farxaa oo u soo xiisaa. waxay ka ilaalisaa erayada xun. Waxay ugu yeertaa ninkeeda:-gacaliye, macaane (macow), walaal, ina-adeer iwm. oo ka kal iyo laab ah, dano khaas ah iyo xilli goonni ahna aanan ku xirnayn.
Haddii uu Ninkeedu wax-beelo(sabool noqdo), gacantiisuna ay eber noqoto, kuma ay kurbayso wax ka baxsan awooddiisa, waxayna u guntataa daboolidda baahida iyo adeegsiga xikmad iyo Iimaan. Noocan toddobaad ayaa ah “Raalliyo” uu ninkii hela uu nasiib leeyahay. Tan ayuuna guursigeeda odaygu kula dardaarmay wiilkiisa,wallow uu “Guurku yahay God Gacanta loo ritay”. Oo looga jeedo nasiib.
Anonymous12/08/2010naagaha soomaalida aad bay u kala qurux badan yihiin laakin kacsigaa ku yar badankooda, foorarsina ma ogola marka loo tagayo, waxay jecel yihiin in mugdiga lagu dhaboReplyDeleteAnonymous12/08/2010naag soomaali kintir leh waxaa laga helaa yurub waayo lama gudin gabdhaha soomaali yurub lagu dhalayReplyDeleteAnonymous12/10/2010soomaali kacsanReplyDeletetawaq12/13/2010sxb naag kintirle ayaan raadinaya oo somaliya ha la ii sopo sheego lolzReplyDeleteAnonymous12/18/2010dumarka yaa ugu raaxo badanReplyDeleteAnonymous12/18/2010dumarka waxa ugu raaxo badan kuwa leh naaso waaweyn,sunana loo guday oo kintir kii kuyaal,dabcan taasoo dhan waxa ka horeysa iney wax ka taqaan sex education.ReplyDeleteAnonymous12/18/2010naag gudan kintir ma laha sxb xitaa haddii loo guday sunna naagta aan gudnayn ayaa kacsi badan leh, laakin su'aal haddan ku weydiiyo sxb naagta naasaha waaweyn sidee ay u raaxo badantahay, dad baa jira ka hela dumarka naasaha yaryarReplyDeleteAnonymous12/18/2010naasaha waaweyn waxey ku macanyihiin salaaxista iyo dhuuqista,lakin naasaha yaryar raaxo maleh fikirkeyga dabcan dad wey jiran saas raaxo u arka.teeda kale gabdhaha gudan suno waa loo reebaa kintirka sas darted kacsigooda wu badanyahay.ReplyDeleteAnonymous12/19/2010raaxada dumarku rabaaan waa tee ??ReplyDeleteyuusuf_hanad1/01/2011raaxada dumarka rabaan waa tan sariirta oo aan laga maarmeen marwalba iyo naxariista marwalba inaad ulahataa oo kalgacel ah nolosha waa in lawadagaa labad dhinacba waa in kalsooni jirta labad dhinacba guriga intaas ayuu ku dhisan yahay qibrad weyn ayaan uleeyahay naagaha tii aad wax urabto iyo tii kalabaReplyDeletemaxamed1/10/2011raaxada dumarka waa la dhameeye odygaa haloo daayo waa tan ugu dabeysa ee aqlkeedu udgoonyhay ilaah daayeey markaa marka loo gudubo hoos ahneed waa gabdha aad iyi aad u wacan oo ilaaliysa ninkeeda >ReplyDeleteFardowso (K)1/11/2011shuunka naagaha kacsiga muyuu yreeyaa amaa waa kordjiyaa, nimanka miyay jecel yihiin gabar sguun leh ??/ReplyDeleteAnonymous1/19/2011dumarka shuunka leh, raga majecla, sababtoo ah maba la arkayo meesha aad wax ku wadib, tankale gabadha shuunka leh markay dhacan qooya farjigeeda yimado, meesha oo dhan buu xumaynayaa, marka ra'yigayga waxan qabaa ma fiicna.ReplyDeleteAnonymous2/13/2011naagaha buuran iyo naagaha caatada ah waxaa u dhexeeya farqi aad u weyn, kuwa buuran oo naasa waaweyn aad bay u raaxo badan yihiin, marka ay foorarsato aad bay kuu kicinaysaa naagta buuran, tan caatada aad dadka uma soo jiidatoReplyDeleteAnonymous11/09/2011asc waxan ra,yi ka odhan lahaa eraybixinta mutaxan maxaa loo doortay miyaan la isticmaali karin kuwa dahsoon oo lafahmi karo mise wax iga horeeyay oo khasbaya ayaa jira sida in ereayada akhrintooda loo isticmaalo dareen qadasho MAHADSANIDINReplyDeleteAdd commentLoad more...